Lammiiwwan Itiyoophiyaa sirna Haajii Sa’udii Arabiyaa irratti du’anii 13 ga’an
Date: October 2, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 2 Onkoloolessa 2015) Imala Hajii Sa’udii Arabiyaatti adeemsifameetti wal ukamasuu umataatiin lammiiwwan Itiyoophiyaa lubbuun isaanii dhaban 13 akka ga’an beekame.
Oduun manni maree dhimmoolee Islaama Itiyoophiyaa irraa argame akka beeksiseetti, sirna amantaa Islaamaa Sa’udii Arabiyaatti raawwatame irratti wal ukkamasuu mudateen lakkoofsi namoota lubbuu isaanii dhabanii beekameera.
Eembaasii Itiyoophiyaa Riiyaaditti argamu waajjira qoontsilaa Jiddaa,mana maree dhimmoolee Islaama Itiyoophiyaa akkasumas koreen qaamolee hawaasaa gara garaa keessaa walitti baba’e hojii qulqulleessuu naannichatti hojjeteen lammiiwwan Itiyoophiyaa lama tibbana du’uun isaanii ifoomsame dabalatee imaltoonni Haajii 13 akka du’aniifi 26 ammoo akka madaa’an mirkanaa’eera.
Lammiiwwan Itiyoophiyaa madaa’an wal’aansa hordofaa akka jiraniifi wayita ammaa haala fayyaa gaarii irratti akka argaman eerameera.
Mootummaan Itiyoophiyaa sirna Haajii guddicha irratti lammiiwwan Itiyoophiyaa lubbuun isaanii dabarteef gadda itti dhaga’ames ibseera.
Balaa wal ukkaamsuu Ummataa Sa’udii Arabiyaatti mudateen lubbuun Namoota 717 biyyaalee 13 keessaa walitti baba’anii kan darbe Magaalaa Miinaa jedhamtuufi Makkaa irraa kiloo meetira shan fagaattee argamtu keessatti.
Balaa kanaan walumaa galatti Namoonni lakkoofsaan 863 ga’anis madaa’aniiru
Previous Previous post: Konsaartiin Artisti Sayyoo Daandanaa Gargaaru Qophaa’aa Jira.
Next Next post: Caffeen Oromiyaa Pirezidaantii dabalatee hogganoota mootummaa filate.